Fattening Foods: Mara ihe na-emebi nri gị!
Ala ahụhụ: Gịnị bụ ya? Kedu ka esi ebufe ya? Have nwere ọgwụgwọ?
ahụ ike	 11 December 2016
Immunity: Otu esi abawanye? Kedu nri ndị kachasị mma?
Ọ dị oke mkpa na ahụ mmadụ na -enwe oke mgbochi oge niile, maka na ọ bụ ya na -echebe anyị pụọ n'ọrịa, na mgbe mgbochi dị ala anyị nwere ike bute nje, dị ka flu, ma ọ bụ ọrịa ndị ka njọ. . Ọzọkwa, site na obere mgbochi, anyị na -enwe ike ọgwụgwụ karị, na -adịchaghị njikere na ọbụna na -akpaghasị ọnọdụ anyị. Mana ọ ga -ekwe omume nwetaghachi ihe mgbochi site na nri, ị maara? Ịhọrọ nri kwesịrị ekwesị nwere ike inye aka meziwanye ihe mgbochi gị ma gbochie ọrịa ọ bụla imerụ gị ahụ, ebe nri bara ụba na vitamin, mineral na ọtụtụ ihe ndị ọzọ nke ahụ kwesịrị ịrụ ọrụ nke ọma. Ọ bụrụ na ịmara ihe nri kacha mma iji bulie ọgụ, ọ gaghị adị mkpa ka ị nweta mgbakwunye iji meziwanye ahụike gị.
Kedu oge mgbochi ọrịa na -agbada ala?
Ọria, ya bụ, ihe nchebe nke ahụ anyị dabere na ọtụtụ ihe ga -adị elu ma na -echebe anyị pụọ n'ọrịa, mana enwere oge ụfọdụ n'afọ mgbe ọ na -agbada ma ọrịa ọ bụla ma ọ bụ oyi na -awakpo anyị. Ọtụtụ mmadụ na -ata ụta maka oge oyi maka nke ahụ, na -ekwu na ihu igwe na -agbanwe na -eme ka anyị nwee nkụda mmụọ na yikarịrị ka anyị ga -arịa ọrịa, mana nke ahụ abụghị naanị n'ihi mgbanwe ihu igwe, kama n'ihi ebe anyị nọrọ. Ka oge oyi na ihu igwe na -abịa, ọ na -abụkarị ebe mechiri emechi ga -ejupụta na ndị chọrọ ịzọ oyi, yabụ ọtụtụ mmadụ na -ekesa n'otu ebe mechiri emechi na -eme ka ọ bụrụ ebe zuru oke maka mbufe nje na nje. gburugburu ebe obibi. Ya mere, usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ kwesịrị ịrụsi ọrụ ike iji chebe ahụ ma mechie ya na obere mgbochi yana oge ụfọdụ ọ nwere ike bute ụfọdụ ọrịa.
Yabụ n'oge a ọ dị mkpa ị attentiona ntị nke ukwuu na nri, nke bụ ebe anyị na -eri nri nwere ike inye aka nwekwuo ihe mgbochi, nwee ezigbo ụra abalị, na -emega ahụ ma na -agbalịkwa ibelata nrụgide kwa ụbọchị.
Ihe oriri kachasị nke na -akwalite ọgụ
Nri anyị bụ otu n'ime ihe dị mkpa maka ijigide ezigbo ihe mgbochi n'ahụ, n'ihi na ọ bụ site na nri anyị na -eri ka anyị ga -enweta vitamin, mineral na ọtụtụ ihe dị anyị mkpa maka ahụ ịrụ ọrụ nke ọma. Ihe oriri ndị na-enyere aka na-alụso ahụ ọgụ bụ mkpụrụ osisi ọhụrụ, akwụkwọ nri, na nri anaghị arụ ọrụ, mana n'ọtụtụ oge anyị anaghị enweta oke ego ha. Lelee ndepụta dị n'okpuru yana nri ndị bụ isi iji bulie ọgụ:
Garlic: Enwere ike iji galik n'ụdị nri dị iche iche, ebe ọ bụ otu n'ime ngwa nri kacha dị adị, na mgbakwunye, o nwere ihe na -eme ka allicin rụọ ọrụ, nke na -ahụ maka ịlụ ọgụ ọrịa na nje. Ndị na -eri galik anaghị enwekarị ike ịrịa oyi.
Ofe ọkụkọ: n'ezie mgbe ị nwere oyi, ma ọ bụ onye ị maara, a gwara gị ka ị nwee ofe ọkụkọ, dịka nkwupụta na ọ na -enyere aka n'ịgwọ ọrịa oyi na flu, na -akwalitekwa mgbochi, bụ eziokwu kpamkpam. acid cysteine, nke na -ahụ maka ịlụ ọgụ nje na iwusi usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ.
Yogurts: Ndụ lactobacilli dị na yogọt bụ nje dị mma nke ahụ anyị kwesịrị ịrụ ọrụ nke ọma, ha na-egbochi eriri afọ pụọ na nje na-ebute ọrịa.
Teas: Teas bụ ihe ọ withụ withụ nwere ọrụ antioxidant nke na -akpali mmụba ọgụ yana na -ebelata esemokwu.
Mkpụrụ osisi Citrus: oroma, lemons na mkpụrụ osisi ndị ọzọ bara ọgaranya na vitamin C na -enyere aka ịbawanye ihe mgbochi, ọkachasị n'ịgwọ oyi na flu. Mana ka ị na -eri mkpụrụ osisi ndị a tupu ị na -arịa ọrịa, otú ahụ ka usoro ahụ gị ji alụso ọrịa ọgụ ga -aka mma. Mkpụrụ osisi ndị ọzọ bara ọgaranya na vitamin C bụ mango, painiapulu, strawberry, pọpọ, kiwi, guava, acerola na blackcurrant.
Anụ: Zinc dị oke mkpa maka ịkwalite ọgụ, enwere ike iri ya site na anụ ehi na anụ ehi. Site na iji Zinc, ọ ga -ekwe omume izere ọtụtụ ọrịa, ebe ọ bụ ya kpatara mmepe nke mkpụrụ ndụ ọcha nke ahụ.
Ndi ibuotikọ emi ama an̄wam fi? Gwa anyị ebe a na nkwupụta!
Kangoo Jump: you marala ihe ọhụrụ a?
Nri ehihie LowCarb: Echiche dị ịtụnanya maka nri ehihie dị ụtọ n’enweghị nri!
Goji Vita - Maka ndị chọrọ ifelata
Yohimbe: Kedu ihe ọ bụ? Kedu uru gị bara? Ọ na-enyere gị aka idalata?
Ringworm: Gịnị bụ ihe a? Kedu ụdị? Have nwere ọgwụgwọ?